Isiphelo esiphakamileyo esilandelayo se-Samsung siza kubhabha kwindawo yokugcina kunye ne-RAM | I-Androidsis
Ukuqwalaselwa kweenkumbulo ezintsha zeSamsung kwii-mobiles nge-UFS 3.0 yokugcina
Isamsung iya kuyo yonke into kwaye kubonakala ngathi ngunyaka apho siya kuba neGPS S10, izakuba sisikhumbuzo seminyaka elishumi kolu luhlu ludumileyo, izakuzisa izinto ezintsha ezifika naphi na. Ngoku yimemori eya kuqokelela kwangaphambili ebaluleke kakhulu ukuze iselfowuni yakho elandelayo ye-Samsung ibhabhe ngendlela engazange ibekho ngaphambili.
Kwaye yile Samsung okwangoku ukwakha imemori yakho entsha ye-LPDDR5. Ngaphandle kokwazi ukuba iya kuba kwindawo yokugcina ubuchwepheshe be-UFS 3.0 eya kufikelelwa kuyo. Ngamanye amagama, zombini i-RAM kunye nokugcina ziya kufumana uphuculo olubalulekileyo lokuphakamisa uphawu lwaseKorea kwenye inotshi.
Isamsung yinkampani ethi, ngaphandle kokuthengisa ii-smartphones ezigqwesileyo, Ukuqokelela isixa esikhulu semali kwiinkumbulo kunye nezikrini. Sele siyazi into enayo emva kwezigcawu ngezikrini, Njengabo nabo graphene neebhetri eza kufika kwi Galaxy Note 10 yaye oko kuya kusenza ukungakuhlawulisi ifowuni malunga namaxesha ama-5 ngokukhawuleza kunesiqhelo.
Kodwa eyona nto isixhalabisayo ngoku zezo nkumbulo zintsha ze-RAM nge-LPDDR5 nakwi ukugcinwa kunye ne-UFS 3.0. Bekubekho umsitho apho iQualcomm ibhengeze malunga ne5G, apho ibinomzuzwana wokubonisa isizukulwane sayo seetshipsi esigxile kwi-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi.
Kwelinye icala sine-UFS 3.0 yokugcina. Fumana phinda kabini ngokukhawuleza kweUFS 2.1 ngesantya se-2.666 MB / s kwaye iya kufumaneka kwiinguqulelo ze-128, 256 kunye ne-512GB yezixhobo zayo zokugqibela eziphezulu; kubandakanya iGPS S10
Kwi-RAM, I-LPDDR5 yeenkumbulo eziza ngo-2020 Kwaye ziya kusebenza kakuhle, ngaphandle kokuphucula ukusebenza nge-44 kunye ne-51,2 GB / s. Ndithe, i-2019 enomdla kakhulu kwisizukulwana seshumi somgca weGlass S oza kuzisa iindaba ezivela macala onke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Samsung » Ukuqwalaselwa kweenkumbulo ezintsha zeSamsung kwii-mobiles nge-UFS 3.0 yokugcina
Uyilo lwe-Honor Magic 2 ityhilwe emva kwevidiyo evuzayo
ImediaTek Helio P70: Iprosesa entsha enobukrelekrele bobugcisa